VAOVAO VAOVAO VAOVAO: Martin Vrijland
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 11 May 2017	• 29 Comments
Tao anatin'ny herinandro vitsy lasa izay, ny vaovao ankoatry ny fifidianana Frantsay dia nifantoka tamin'ny fandrahonana ady Amerikana tamin'i Korea Avaratra. Izany firenena mampidi-doza tampoka mafy satria ho miasa eo amin'ny fampandrosoana ny fitaovam-piadiana nokleary ary izany dia tsy ilaina raha hoe Amerika, fa tsara ny fialan-tsiny hiverina [...]
Tsy voatery hanohitra ny rafitra ianao, fa tokony hahomby ao anatin'izany
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 2 May 2016	• 1 Comment
Maro no mihevitra fa tsy tokony hanohitra ny "rafitra", fa tokony hahita fomba hahombiazana. Azonao atao, ohatra, mahita fomba ahazoana vola na ao anatin'io rafitra io ao anatin'ny rafitra misy ankehitriny. Na dia mazava ho azy aza fa raha mamoaka loharanom-pitarafana ianao, ity [...]
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 16 Martsa 2016	• 16 Comments
Ny fanontaniana mahazatra ahy dia ny hoe: "Inona no tsy mety amin'ny governemanta tatsimo?" Indraindray dia misy zavatra hafa hafa manampy: "Misy ihany koa ireo olona tsotra tsotra mila tari-dalana ary mbola ilaina ihany raha toa ianao maneran-tany manana fitsipika mitovy? ​​"Raha ny tena izy dia misy fanontaniana mety havoakanao. Izany [...]
Sakafo avy amin'ny nanan-teolojia sy ny fikarohana an'i Google tsy mety maty
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 27 Febroary 2016	• 12 Comments
Google dia nanakarama jeneraly ambony indrindra amin'ny fikarohany tsy mety maty. Google dia tanteraka amin'ny 'sarintany' araka ny filazan'ny mpanotrona olombelona Ray Kurzweil izay nampiditra ny teny hoe 'singa' ary milaza fa ny olombelona ao amin'ny 2045 dia mahatratra ny tsy fahafatesany. Talohan'io dia nitatitra aho fa nahita fa mety hiverina amin'ny alalàn'ny [...]
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 24 Febroary 2016	• 20 Comments
Ny zava-drehetra manodidina anao, na ny vatanao, dia vao noforonina rehefa hitanao izany. Tena fanambarana feno fahasahiana izany. Na izany aza, ity fanambarana ity dia tohanan'ny fikarohana ara-tsiansa eo amin'ny sehatry ny physique quantum. Atsangana hitondra fizika manana fitsapana ambany miverimberina imbetsaka manerana izao tontolo izao, satria nitondra ny tsy finoana be toy izany, ary niara-mahagaga lehibe. [...]
Ny matrices dia tsy manan-danja, ny zava-drehetra dia ao anatin'ny "saina"
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Jolay 2015	• 8 Comments
'Tsy misy dikany ny matrices, mitranga ao an-tsainao daholo ny zava-drehetra', dia fanambarana henoko tamin'ity herinandro ity no niheverako fa ilaina izany. Tsy dia misy dikany ny miresaka momba ny matrices sy ny mombamomba azy; Ny mieritreritra ny rafitra fahefana eto an-tany dia tsy manan-danja; Ny karazana traikefa rehetra dia misy ao amin'ny [...]
Ny fifandraisana eo amin'ny olona sy ny fiandohany
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 12 June 2015	• 19 Comments
Na dia azon'ny olona aza ny fanazavako ny momba ny fizotry ny physique sy ny 'Double Slit Experiment' (jereo eto) dia mety ho tonga amin'ny fehin-kevitra fa manana fomba fijery mifototra amin'ny fiainana aho, izay tsy misy afa-mijery fotsiny ny zava-drehetra ary tsy misy afa-tsy ny olona ihany Ny fandraisana "zava-misy" ho toy ny karazana holograma ho an'ny tetikasa, dia ny [...]
Fanahy, fanahy ary vatana: inona izany ary inona no asany?
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 23 Aprily 2015	• 46 Comments
Ao amin'ny ankamaroan'ny fivavahana, indraindray ny hoe "fanahy, fanahy ary vatana" no resahina. Noho izany ny ankamaroan'ny olona dia naheno momba ireo teny ireo, saingy mety ho sarotra ny hamaritana ny roa voalohany, fa isika rehetra dia mahafantatra hoe inona ny vatana. Izaho dia namaritra ny vatantsika ho toy ny bio-solosaina ary [...]
Ny zavatra rehetra eo ambanin'ny masoandro dia mifangaro
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 16 Aprily 2015	• 9 Comments
'Eo ambany masoandro ny zava-drehetra'; dia ny hira Pink Floyd mihira ao amin'ny hirany 'Eclipse'. Ny zavatra rehetra eo ambanin'ny masoandro dia 'mifangaro'. Inona no tiany hambara amin'izany? Nanokana lahatsoratra iray aho teo aloha (jereo eto), saingy nentanim-panahy androany hiverina any. Raha ny zava-drehetra [...]
Ahoana no ahafahanao manapaka amin'ny teboka ary mbola velona ao anatin'izany?
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 16 Aprily 2015	• 4 Comments
Aho, tamin'ny Septambra 2014 nahazo - ny aanleidling ny lahatsoratra momba-teraka - im-betsaka ny fanontaniana izay mivaky toy izao amin'ny ankapobeny: "Ahoana no fomba tena tsy hanala-teraka ary mbola velona ao amin'ny lasitra", ohatra nisy olona manaraka Ny fanontaniana dia nanontany [quote] efa ela aho no liana [...]
Total visits: 14.677.801
Martin Vrijland op Zoma Purple: ahoana ny fomba ananan'ireo ankizy any an-tsekoly ny fampielezankevitra LGBTI
Fakafakao op Zoma Purple: ahoana ny fomba ananan'ireo ankizy any an-tsekoly ny fampielezankevitra LGBTI